Guddoomiye Mursal oo xildhibaannada ka codsaday in aysan Kaniisad tusaale usoo qaadanin marka Baarlamaanka ay ka hadlayaan – Kalfadhi
Guddoomiye Mursal oo xildhibaannada ka codsaday in aysan Kaniisad tusaale usoo qaadanin marka Baarlamaanka ay ka hadlayaan
December 3, 2020 December 3, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo shir-guddoominayay fadhigii Baarlamaanka ee bishii Novermber looga hadlayay sharci la xiriira Beeraha ayaa xildhibaannada kula dar-daarmay in marka ay Golaha ka dhex hadlayaan aysan tusaale usoo qaadanin Kaniisad.
Mudane Mursal, ayaa si qiira leh u sheegay in meelaha Ilaahay lagu caabudo aysan kamid aheyn Kaniisad.
“Halkan marka aad soo istaagtaan oo aad tusaale soo qaadaneysaan, dal Islaam ah ayaad joogtaan, Masaajid ayaa Ilaahey lagu caabudaa. Mar dambe yaan tusaale loo soo qaadanin, meel Ilaahey lagu caabudo marka aan dhiseyno in Masaajid aad wax kale ku dartaan, aad ayaan uga xumahay”, ayuu yiri.
14-kii bishii September, Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa sheegay in Baarlamaanka uusan ansixin karin sharci ka hor imaanaya Diinta Islaamka iyo maqaasideeda, sida Dastuurka uu caddeynayo.
Baarlamaanka Puntland oo xasaanadii Xildhibaannimo ka qaaday 8 mudane oo Baarlamaanka ka tirsan
Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo maanta akhrinta 2-aad marsiiyay xeer-hoosaad